Mgbochi rickets na ụmụ ọhụrụ
N'ime ọnwa iri na abụọ nke ndụ, a na-etinye ntọala nke ahụike nwatakịrị ahụ n'ọdịnihu. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ka ndị nne na nna gbalịsie ike ịtọ ntọala maka ahụike nke nwa ahụ. A ga-elebara anya n'oge a nke ndụ nwatakịrị gị iji gbochie mgbochi rickets.
Rickets bụ ọrịa dị oké njọ nke metụtara mmebi nke ọnụọgụ nke calcium nke phosphorus, nke a na-akpata nrụpụta ọkpụkpụ ọkpụkpụ. A na-ahụkarị ọrịa a n'etiti afọ abụọ ruo ọnwa abụọ. Ya mere, mgbochi nke rickets na ụmụ ọhụrụ kwesịrị ịbụ otu n'ime ọrụ ndị isi nke ndị nne na nna n'oge a.
Ihe ndị na-ebute na rickets
Site na nne:
ọ dị afọ iri na asatọ ma ọ bụ karịa afọ 35;
nsogbu nke ime ime;
ihe oriri na-ezighị ezi n'oge ime nwa;
ụfọdụ ọrịa nke nne (ọrịa nke akụkụ eriri afọ, akụrụ, ọrịa metabolic).
Site n'akụkụ nwa ahụ:
a na-ebute ọtụtụ n'ime ụmụ ọhụrụ na-arịa ọrịa site na June ruo December;
prematurity, ịmụ nwa n'okpuru iwu;
nnukwu ahụ na-amụ nwa (karịa 4 kilo);
ngwa ngwa na-abawanye ngwa ngwa n'ime ọnwa atọ mbụ nke ndụ nwa ahụ;
ezughị oke na ikuku ikuku;
nri oge mbụ.
Ngwunye nke rickets na nwata n'ọdịnihu n'oge ime ime
Mgbochi nke rickets bụ ihe mgbochi nke rickets n'oge ime. Ọ na-agụnye ihe oriri na-edozi anya nke nne na-eme n'ọdịnihu na ihe oriri ndị nwere protein, calcium, phosphorus, vitamin D, vitamin B. Nwaanyị dị ime kwesịrị ịgagharị n'ọtụtụ ikuku, imega ahụ, na-eme ngwa ngwa dị iche iche (dịka ndụmọdụ ndị ọkachamara na-ekwu banyere ya).
Otu n'ime isi ihe sitere na calcium nwere ike ịmata mmiri ara ehi na mmiri ara ehi, cheese, nuts, green vegetables. Mkpụrụ ọgwụ nke calcium preparations kwesịrị iwere na dị ka gwara gị dọkịta. A na-achọta anụ dị na azụ, imeju anụ, anu ehi na nsen.
Vitamin D na-abịa na nri na-esitekarị n'ụdị nrịgo (ihe ndị na-agbanwe n'ime ahụ na vitamin D). Onye buru ibu nke vitamin D bụ 7-dehydrocholesterol, bụ nke n'okpuru nduzi nke ultraviolet na akpụkpọ ahụ ghọọ vitamin D 3. Vitamin D dịka D 3 nwere mmanụ imeju anụ, tuna, akwa nkochi.
Ihe dị mkpa bụ ime atụmatụ ime. Maka afọ ime, ọnwa nke mgbụsị akwụkwọ ka mma, n'ihi na a mụrụ ụmụ ọhụrụ na njikwa okpomọkụ iji nweta vitamin D zuru oke n'ihi mmetụta nke ụzarị ultraviolet anyanwụ.
Na-egbochi rickets mgbe amuchara nwa
Ndị dọkịta na-eji ihe mgbochi n'oge mgbụsị akwụkwọ na-akọwa ihe ngwọta nke vitamin D 3 (ọgwụ magani "Aquadetrim"), malite na 3-4 izu afọ, 1-2 tụlee kwa ụbọchị. M ga-atụ aro ịṅụ vitamin D 3 n'okpuru nyocha ọ bụla nke ule Sulkovich (na-ekpebi excretion nke calcium na mmamịrị), ebe ọ bụ na vitamin D na-ekpuchibiga ókè. enweghi ihe ojoo.
Site n'inye nri anụ, ị ghaghị ịhọrọ ngwakọta nke edozi na calcium, phosphorus na vitamin D. A ghaghị ịrịba ama na a na-enye mmasị mgbe nile maka ịzụ nwa. Ya mere, ọ dị gị mkpa ime mgbalị ọ bụla iji na-arahụ nwa ara.
Lezienụ anya na iwebata nri ndị na-enye aka maka nwa ahụ. A na-atụ aro ka ọnya mbụ bụrụ ihe oriri. A ghaghị inye curd site na ọnwa 6.5-7.5, anụ - site na ọnwa 6.5-7, na ngwaahịa azụ na azụ - site na ọnwa asatọ. Mgbe ị na-ahọrọ ọka na echefukwala iji nlezianya gụọ ihe mejupụtara, na-elebara anya na ọdịnaya nke calcium, phosphorus na vitamin D.
Ọrụ dị mkpa n'igbochi rickets na ụmụ ọhụrụ bụ iji jide n'aka usoro mgbochi zuru ezu: ịmegharị ntụrụndụ n'efu, ịme ntụrụndụ kwa ụbọchị na ịhịa aka n'ahụ, usoro siri ike na mmiri. Echefula banyere baths nke ikuku.
Ọ dị mkpa inye nwa ahụ ka ọ na-agagharị n'èzí. Na ihu igwe ọkụ, a na-atụ aro ka ịnọ na onyinyo nke ìhè dị.
Cheta na ọrịa a dị mfe igbochi karịa ịgwọ. Ya mere, nlekota ihe niile iji gbochi ya dị ezigbo mkpa iji gbochie ọrịa ndị dị otú ahụ dị oke egwu.
Mmetụta nke coccyx, n'azụ na n'úkwù n'ime nwatakịrị
Esi mee ka ịkpụ aka nke lacrimal canal na nwa: Usoro, vidiyo
Kedu ka esi enye nwata ahụ ọgwụ?
Ịhịa aka na mpaghara olu olu maka ụmụaka, nkwupụta na ọzụzụ video
Ndoghachị mgbe ụmụaka gachara
Ọrịa ọrịa ụmụaka. Mgbochi na ọgwụgwọ
Esi enye umu umuaka
BBQ sandwiches na anụ ezi na kabeeji
Ọgwụgwọ nke ntutu isi
Nrọ nke nrọ nrọ na-atụ egwu ihe bụ nrọ
Kedu akwụkwọ nri dị mma maka ụmụaka?
A katọrọ Alexandra Zadoynova maka ịkele nwa ya nwanyị na Instagram
Mmiri ara ehi na utu
DiCaprio adịghị emerụ ahụ mgbe ọ gbara ya na bear
Ụzọ isi meziwanye obi na ike
Nkịta na-asụ Bekee Cocker Spaniel
Ezigbo enyi: onye egwuregwu
Achicha na chocolate fousse na hazelnuts
A tọrọ ụtọ uzommeputa: pancakes na mango puree
Kasị adaba nwa bat
Nri na chocolate
Esi mee ngwa ngwa iji mechie achicha
Amụma maka ịsa uwe n'elu uwe